အရှေ့တိုင်းမှ သစ်ခုတ်သမား ၄ သောင်းကို အလုပ်ခန့်မည် မူလတန်း နှင့် အလယ်တန်း ကျောင်းများ ပိတ်မည် - Pandaily
Categories: Industry ကိုPandaily စက်တင်ဘာ 24, 2021 စက်တင်ဘာ 25, 2021 မှာ Posted
ေနာက္က်မွသောကြာနေ့ သတင်းများအရ အရှေ့တိုင်းမှ သစ်များကို ခုတ်လှဲမည့် ဝန်ထမ်းအရေအတွက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို ရွေးချယ်မည် ဖြစ်သည်။ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့က ပြုလုပ်သည့် အလုပ်အမှုဆောင်အစည်းအဝေးတွင် အရှေ့ပိုင်းခရိုင်သစ်တည်ထောင်သူ ဥက္ကဌ ဦးယုမင်းဟုန်းက ကျောင်းအပ်ခြင်းကို ကြေညာပြီးနောက် ကျောင်းဆင်းချိန်၊ ကျောင်းအပ်ချိန် ရပ်နားချိန်၊ မူလတန်းကျောင်းဆင်းချိန်၊ အလယ်တန်းကျောင်းဆင်းချိန်၊ ကျောင်းအပ်ချိန်၊ မြို့ဝင်တန်းဆင်းချိန် စသည့် အချက်များကို တဖြည်းဖြည်း ပိတ်သိမ်း ဆောင်ရွက်မည်ဟု ဆိုသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ သစ်လွင်သော အရှေ့တိုင်းသည် ၎င်း၏ အရေးပါဆုံး ဝင်ငွေ အရင်းအမြစ်ကို စွန့်လွှတ်ရမည် ဖြစ်သည်။ ကိုဆွေသည် ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းက ငွေတောင်ဘက်ကနေ မူလတန်း၊ အလယ်တန်းနဲ့ အလယ်တန်းကျောင်းတွေကို ကျူရှင်တက်ပြီးနောက် လုပ်ငန်းသစ် အရှေ့တိုင်းသို့ ၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဝင်ငွေခွန် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ရရှိမည်ဟု သိရသည်။
ဒီပညာေရးကုမၸဏီကုိ တည္ေထာင္ခဲ့တာ ၂၈ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ စတင္သင္ၾကားေပးေနတာပါ။ ၎သည္ ၂၀၀၅ တြင္ အြန္လိုင္းစီးပြားေရးလုပ္ ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ KoolEarn ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကစပြီး လုပ်ငန်းဝင်ငွေရဲ့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိတဲ့ ကုမ္မဏီတွေဟာ မူလတန်းကနေ အလယ်တန်းအထိ ဝန်ဆောင်မှုတွေကနေ ဝင်ငွေရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးေက်ာ္တင္က အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းကန္႔သတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ လက္ရွိ မူဝါဒဝန္းက်င္တြင္ကြည်ညှိ ဝန်းရံကြပါ.
သည်မူဝါဒဟာ ဇူလိုင်လကစပြီး ကျောင်းပြင်ပလေ့ကျင့်ရေးကဏ္ဍကို ကန့်သတ်ချက်အများအပြားနဲ့ စတင်မိတ်ဆက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ေပက်င္းက စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ၿပီး ေက်ာင္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားကို ကုစားေပးရန္ ကုမၸဏီမ်ားကို ေတာင္းဆိုအကျိုးအမြတ်မယူတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာဖို့ မဆုံးခင်.
၎၏ လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ျခင္းႏွင့္အတူ အလုပ္အ ကိုင္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ရ သည္။ မူလက ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းမွာ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ မူလက လူ ၄ ေသာင္းေလာက္ စီစဥ္ခဲ့ေပမယ့္ စက္တင္ဘာလလယ္အထိ ၁ ေသာင္းေအာက္သာ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံနီးစပ္သည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္တြင္ ယခုႏွစ္ဆန္းပုိင္း၌ အလုပ္သမား ၁၀၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။
အရှေ့တိုင်းမှ ဝင်ရောက်လာသည့် သစ်များကို အများအားဖြင့် မြို့တိုင်းတွင် ကျောင်းခွဲများ တည်ထောင်ထားပြီး၊ သင်ကြားရေးစင်တာကို အထက်အောက် တွင်သာ ထားရှိကြသည်။ ကျောင်းတွင်းဝင်ငွေများနှင့် အမြတ်အစွန်း အလိုက် ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် သတ်မှတ်ထားသည်။ စာသင္ တိုက္မ်ား ၿပိဳလဲၿပီးေနာက္ အ ေနာက္၊ အေရွ႕၊ ေအာက္ေက်ာင္းခြဲမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းပိတ္သြား မည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ေက်ာင္းခြဲမ်ားကို Grade B မွ အလယ္တန္းအထိ ဘာသာရပ္အလိုက္ လုပ္ ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ အရင္က Grade-B နဲ႔ အထက္ ေက်ာင္းခြဲေတြကို အနည္းဆံုး ၁ဝ မွတ္စီ လ်ာထားတယ္။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ Grade B ကျောင်းခွဲပေါင်း ၁၂ ခုရှိပြီး ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်မှာ ဝင်ငွေ သန်း ၂၀၀ ကျော် ဒါမှမဟုတ် သန်း ၅၀ ကျော် အမြတ်ရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါေပမဲ့ Grade-A နဲ႔ Grade-B ေတာင္မွ သင္ၾကားေရးစင္တာကို ပိတ္လိုက္ေတာ့တယ္။ နန္က်င္းႏွင့္ ကြမ္က်ိဳးရွိ အျခားဝင္ေငြျမင့္မားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ၁၀-၂၀ သင္ၾကားေရးစင္တာကို ပိတ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရင္းျမစ္တစ္ရပ္က ေျပာသည္။
Topics: မြင်ကွင်းOriental DFUB မွ ပိတ္ထားသည့္ ၁၂ တန္းေက်ာင္းသားေလးအား က်ဴရွင္
အွန်လိုင်းပညာရေးကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ Thar Tar က Sitebo ရဲ့ အထူးပြုဘာသာရပ်မှာလည်း သင်ကြားရေးစင်တာကို ပိတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ အရပ်၂၁ ရာစု စီးပွားရေး အစီရင်ခံစာပီကင်းမှာ မြန်မာစာဘာသာရပ်မှာ ဂုဏ်ထူးရှင် ၅၃ ဦးရှိပြီး ပီကင်းမှာ ပုံမှန်သင်ကြားမှု ၂၆ ဦးသာ ရှိတော့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ အမှတ်တံဆိပ်ကို လတ်တလော သတ်မှတ်ထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ ယခုနှစ်ဆောင်းဦးရာသီတွင် စာသင်ချိန်ပြီးဆုံးပါက ၎င်း၏ မူလတန်း နှင့် အလယ်တန်း ဘာသာရပ်များ အားလုံးကို အွန်လိုင်းမှ ပြောင်းရွှေ့ရမည် ဖြစ်သည်။